Yiziphi izinto eziphezulu zokusesha eziphezulu ze-Amazon nokuthi ungazuza kanjani kuzo?
Wake wazibuza ukuthi yimiphi imikhiqizo esesho e-Amazon ephezulu? Lolu lwazi alufihliwe kuwo wonke umuntu. Noma kunjalo, akuwona wonke abasebenzisi abajwayelekile, kanye nabathengisi be-intanethi, abakwazi ukuwuthola. Kodwa-ke, labo abafuna imikhiqizo ukuthengisa nge-e-commerce site noma ngokuqondile Amazon kungaba nesithakazelo kule lwazi.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezinto ezithile ezifunwa yi-TOP e-Amazon ezingakusiza ukuba wenze inzuzo. Futhi uma ungena ebhizinisini lokuthumela phansi noma ibhizinisi le-e-commerce, ungabangela lezi noma imikhiqizo efanayo kusuka kumapulatifomu amaningi, njenge-f - hosting linux plan web.i. Alibaba noma i-Aliexpress. Ngaphezu kwalokho, sizoxoxa ngezindlela zokwakha umkhankaso wokumaketha wokuthengisa ngemikhiqizo eshisayo ngempumelelo.
Ngakho-ke, ake sixoxe ngemikhiqizo e-hot niche e-Amazon esingayisebenzisa ekukhuliseni imali.
Izinto ezifakiwe TOP kwi-Amazon
Ngaphambi kokuthi siqhubekele engxoxweni yezinto ezisesho e-Amazon e-TOP, ngingathanda ukukuvula kancane kodwa okuphawulekayo Imfihlo ye-e-commerce. Ukuze uphumelele kudingeka udalule ikhasimende lakho, hhayi kwimali yakho engenayo. Udinga ukuthola inkinga yomsebenzisi futhi umnikeze isixazululo esingcono kakhulu esimweni somkhiqizo owathengisayo. Ukwakha inqubo efanele yokuthengisa, udinga ukuthola ukuthi kungani amakhasimende akho angase asebenzise imali kulokho okuphakamisayo. Kukhona njalo isizathu sokuthenga ngamunye. Uma wazi lesi sizathu, ungaphatha inqubo yokuthengisa futhi wenze imali njalo. Into engcono kakhulu ngalokhu ukuthi udinga ngisho nokukhuthaza imikhiqizo yakho njengoba abasebenzisi bazoba nesithakazelo kuwe. Ngalokhu konke okushiwo ngingathanda ukukusho ukuthi udinga ukugxila kakhulu ekutholeni iqembu elibalulekile labantu abafuna indlela yokuxazulula izindaba zabo eziyinhloko. Uma unenhlanhla ukuthola laba bantu, ungabathengisa imikhiqizo eminingi ehlobene nezinkinga zabo esikhundleni seyodwa.
Ngakho-ke, manje uma unomqondo wokuthi uzoqala kuphi ibhizinisi lakho le-ecommerce, singakwazi ukuqhubeka nezinto ezisesheke e-Amazon.
Ezinsukwini zethu, abahloli bekhomputha banezinga eliphakeme kakhulu okudingekayo ngenxa yokuqedela ngokuzenzakalelayo kwezinqubo zomsebenzi nokukhiqiza. Zivumelana nezinhloso ezifanayo nezinhloso ezifana namathebhulethi nama-laptops.
Bathengwa kakhulu ngamabhizinisi amakhulu nezinkampani zedijithali njengoba zingasiza inombolo izinhloso ezahlukene.Izithameli zakho ezihlosiwe yizindawo namahhovisi kanye nezindawo zokusebenzela ezidinga ama-desktops amakhulu kubasebenzi bawo. Ngaphezu kwalokho, abasebenzi bakho bangaba nesithakazelo kubanikazi bezithombe, abadlali be-PC nabasebenzisi abavamile abafuna isipiliyoni esibucayi esibalulekile.
Abaqaphi bekhompyutha ukufakwa emakethe emakethe enenzuzo lapho ungathola khona imali eningi kakhulu.
Phakathi kwamakhompiyutha athengwa kahle kakhulu, singakwazi ukuhlukanisa lemikhiqizo elandelayo - HP, LG, ASUS, Samsung,
Izihlalo zamageyimu zihamba phambili ezinsukwini zethu ngenxa yokukhuphuka kwemboni yokudlala inthanethi. Zonke izihlalo zokudlala ziyabiza ngokuzenzakalelayo ngoba yizona izinto eziseshelwa nge-TOP ku-Amazon. Lezi zitulo zifakwa ku-niche enezindleko eziningi ezifana nemishini yokudlala, imiphakathi, nokunye.
Singabona ububanzi obuningi bamanani kule niche emakethe. Izindleko zesitulo esisodwa sokudlala zingaqala nge-$ 500 futhi ziphakamise ku-$ 20,000.
Izilaleli ezingaba nesithakazelo kule mikhiqizo ekhethekile zibandakanya abathandi begeyimu, abadlali bezemidlalo, abahloli bezemidlalo, abalandeli bezemidlalo kanye nabadlali be-PC namageyimu wevidiyo.
Phakathi kwemikhiqizo ehlelwe kahle kakhulu kumidlalo yokudlala emakethe we-market, singakwazi ukuhlukanisa okulandelayo - I-Openwheeler, i-Playseat, i-Commander, ne-E-WIN.
Elinye iqembu eliyintandokazi yemikhiqizo elingakunikeza inzuzo enkulu . Cishe bonke abashayeli basebenzisa la madivayisi ukuze baqonde endaweni abayidingayo. Amadivayisi we-GPS ahlinzeka abasebenzisi ngebalazwe elinembile nemigwaqo kunama-smartphone. Awudingi ukuthembela kumamephu nasezinqoleni zomgwaqo uma unesidingo se-GPS. Ngakho, ingasetshenziswa njengobufakazi besikhathi esizayo..Ngaphezu kwalokho, la madivayisi ayaphathwa futhi angasetshenziswa kuphi. Ukulondoloza loluhlobo lwemikhiqizo, uzosiza abasebenzisi ukuxazulula izinkinga zabo zamanje. Kusho ukuthi uzoba usizo futhi imikhiqizo yakho iyoba nesidingo esikhulu.
Abathengi abangakwazi ukuthenga amadivaysi e-GPS bangabashayeli bamatekisi, abagibeli, abashayeli bokuhambisa, abashayela abavamile, abashayeli bokuqala, amaphoyisa kanye nabo bonke abantu bhizinisi abadinga ukuhamba nabo emabhizinisini nasemhlanganweni.
Ama-brand athengisa kakhulu amadivayisi we-GPS afaka i-Garmin, i-Samsung, ne-Rand.
Indlela yokuphumelela e-Amazon ekuthengiseni izinto eziphenya nge-TOP?
Okokuqala, udinga ukwakha isayithi lokubuyekeza elizungeze umkhiqizo ofuna ukuthengisa futhi uzama ukukala lesi siza kuwebhu. Kufanele ukhuthaze leli sayithi kuma-injini eyaziwa kakhulu njenge-Google noma i-Bing ngombuzo wakho ohlosiwe. Udinga ukwakha uhlu lwezinto ezifanele kakhulu kumakethe wakho we-eiche ecommerce e-market. Ngakho-ke, uzodinga umkhankaso omuhle wokusungula injini noma ukutshala imali kusikhungo sokuxhumanisa ngokusebenzisa ama-blog amanethiwekhi wangasese noma izinhlelo zokubambisana. Ungazuza ngokusebenzisa amasayithi wokubuyekeza okugunyazayo alandelayo: Usesho lwabathengi, Imibiko yabathengi, i-CNet, ne-Engaged.
Esiteji sesibili, ungakha umthombo wewebhu wokuqhathanisa amanani. Lapha ungakwazi ukuqhathanisa ububanzi bemikhiqizo ye-niche efanayo ekhombisa amanani abadayisi abahlukene. Amasayithi okuqhathanisa awaxhomeke kuphela ekusebenziseni injini yokusesha futhi angathatha imoto kusuka eminye imithombo yewebhu ehlukahlukene. Nikeza izivakashi zakho zendawo ngezici ezahlukahlukene, izinqubomgomo zamanani, amamodeli nezinketho zokuqhathanisa, futhi ziyoba izivakashi zakho ezijwayelekile, ziletha ithrafikhi eguqulwe.
Futhi ekugcineni, ungakha ibhulogi ye-niche futhi ukhulume ngemikhiqizo yakho ye-niche yonke. Kuyindlela yokukhangisa ewusizo ebonisa ubuchwepheshe bakho kule ndawo ethile futhi idala isithombe esihle somkhiqizo. Udinga ukuhlinzeka abafundi bakho negunya kanye nokuqukethwe okuhambisana nokuqonda okuthakazelisayo nedatha okucwaningwe.
Kule ngqungquthela, siqoqa izinto ezifunwa yi-TOP e-Amazon esithemba ukuthi izokunikeza imibono yemikhiqizo ekukhuthazeni ukwenza imali kusuka ku-platform ye-Amazon yokuhweba. Izinto engizikhulume kulesi sihloko, zithengise amanani amanani aphezulu futhi uthengise kahle phakathi kwabasesho bama-Amazon, ngakho-ke unamathuba okusebenza kahle nebhizinisi lakho le-Amazon.